Nidaamyada dijitaalka ah ee maaliyadeed: maxay yihiin iyo sidee u shaqeeyaan? | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Sanadihii la soo dhaafay, aaladaha maaliyadeed ee dhijitaalka ah waxay noqdeen kuwo moodada u ah kanaallo lagu horumariyo maalgashiga Laakiin maahan wax ku saabsan howlaha caadiga ah, laakiin iyada oo loo marayo alaabooyin taxane ah oo ku saleysan sinnaanta kuwaas oo abuuraya khatar weyn howlaha. Taasi waa, meesha aad ka heli karto lacag aad u fara badan waqti gaaban, laakiin sidoo kale kaga tag dhamaan caasimada inta aad ku sii jirto. Taasi waa sababta ay feejignaanta u noqon doontaa midda guud ee dhammaan ficilada maalgashadayaasha doorta maalgashiyadan gaarka ah.
CFDyadu waa aalado adag waxayna leeyihiin khatar sare oo ah inay dhaqso u lumiyaan lacag la'aanta awgeed. 66.77% koontooyinka maalgashadayaasha tafaariiqdu waxay lumiyaan lacag markay ka ganacsanayaan CFDs. Waa inaad tixgelisaa haddii aad fahamtay sida CFDs u shaqeeyaan iyo haddii aad awoodi kartid inaad qaadatid halista sare ee luminta lacagtaada. Nuqul adeegyada sarrifka ayaa khataro dheeri ah ku haya maalgashigaaga sababo la xiriira nooca badeecadaha noocaas ah. Haddii halista ku jirta ay kuugu muuqan weydo adiga, way fiicnaan doontaa inaad ka tanaasusho badalkan gardarrada ah ee maalgashiga.
Fasalkan wax soo saarka maaliyadeed waxaa lagu soo saaray laba qorshe hawleed. Dhinac, si loo qanciyo maalgashi muddo-gaaban ah oo loo abuuray maal-gashadeyaashaas raadinaya dariiq dheereeya oo lagu gaaro himilooyinkooda oo aan ahayn cid kale dhaqso ku kasbado faa'iidooyinka raasumaalka dhaqdhaqaaqooda suuqyada maaliyadeed. Dhinaca kale, iyada oo loo marayo barnaamijyada loogu talagalay xirfadleyda suuqyada maaliyadeed. Halka ay tabarucooda ugu weyni kujiraan xaqiiqda ah inay kaa caawin karaan nuqulka macaamillada iyo inay si buuxda u xakameeyaan dhammaan khataraha suurtagalka ah.
1 Nidaamyada dhijitaalka ah: saxeex
2 Samee deebaaji
3 Hawlwadeenada maalgashiga ayaa damaanad qaadaya
4 Barnaamijyada gunnada
5 Tilmaamaha lagu ilaalinayo barnaamijyadan
6 Nidaamka ka bixitaanka otomaatiga ah
Nidaamyada dhijitaalka ah: saxeex
Si loo bilaabo ka ganacsiga suuqa sarifka lacagaha qalaad ama hantida kale ee maaliyadeed, waxaa lagama maarmaan ah in laga diiwaangaliyo aagga xubinta lana furo akoon ganacsi. Wixii loogu talagalay ganacsatada bilowga ah, koontada loogu yeero demo ayaa la heli karaa. Waa maxay tan macnaheedu? Waa hagaag, aad u fudud, hab lagu barto maal-gashade ahaan laakiin leh lacag macquul ah iyada oo aan wax khatar ah u lahayn luminta lacagaha dhabta ah. Uma baahnid inaad sameyso wax maalgelin maaliyadeed oo muhiim ah.
Tallaabada xigta waa inaad soo dejiso oo aad rakibto goob ganacsi. Si loo iibsado loona iibiyo lacagaha ama alaabada kale ee maaliyadeed, waa inaad soo dejisaa barnaamijkan oo aad ku rakibtaa kombiyuutarkaaga gaarka ah ama wixii kale qalab tikniyoolajiyadeed daqiiqado yar gudahood in lagu bilaabo ka shaqeynta suuqa maaliyadeed ee la doortay. Sikastaba xaalku ha ahaadee, si lagaaga caawiyo inaad barato sida loo saadaaliyo dhaqdhaqaaqa labada lamaane, aaladahaan casriga ah waxay bixiyaan qalab waxbarasho iyo tixraac badan.
Marxalad kale oo ka mid ah geeddi-socodka maal-gashiga ayaa lagu xaqiijiyey iyada oo loo marayo hawlgallada lacagta dhabta ah. Dareenkaan, si aad u bilowdo ganacsiga lacagta dhabta ah, waxaad u baahan tahay inaad dhigato koontadaada ganacsiga. Waxaa lagu sameyn karaa qeybta loo magacaabay sida Debaajiga ama Ka Noqoshada, iyadoo kuxiran waxa noqon doona dhaqdhaqaaqa adeegsadayaasha gudaha xubinta xubinta ka ah. Waad dhigan kartaa koontadaada ganacsiga adoo isticmaalaya nidaam kasta oo lacag bixin ah oo jira, oo adiga kugu habboon. Meesha kuwa ugu caansan laga heli karo, laga bilaabo wareejinta bangiga ilaa isticmaalka kaararka deynta ama kaarka.
Tallaabada xigta waxay ku saleysan tahay sameynta macaamil ku saabsan barta casriga ah. Xagee laga furaa amar cusub, waa inaad sheeg mugga (Waxaa lagugula talinayaa inaad kubilaabato uguyaraan 0.01) kadibna kala doorto inta udhaxeysa iibinta iyo wax iibsiga. Hawshan ka dib, amarkaagu wuu furan yahay, taas oo macnaheedu yahay inaad bilowday inaad ka ganacsato suuqa la doortay iyo inay noqon karto qaar ka mid ah kuwa badan oo ay leeyihiin hawlwadeenada maaliyaddu. Halkee, bilihii la soo dhaafay, mid ka mid ah sida hal abuurka leh ee ku xiran lacagaha dalwaddii la isku daray, halkaasoo bitcoin uu ku yaallo.
Hawlwadeenada maalgashiga ayaa damaanad qaadaya
Barmaamijyadan aadka u gaarka ah, guud ahaan, waxay xubno ka yihiin Sanduuqa Magdhowga Maalgashiga ee qaar ka mid ah waddamada ku habboon ama ka yar. Ujeedada sanduuqa ayaa ah in macaamiisha caymiska leh ee shirkadaha diiwaangashan la siiyo lacago magdhow ah haddii shirkadaha aysan awoodin inay iyagu iska bixiyaan. Xaaladahaas oo kale, magdhowgu wuu noqon karaa ilaa 20.000 euro.
Xaddiga ugu yar ee deebaajiga ugu horreeya ee xisaabaadka ay horumariyaan aaladaha maalgashiga dhijitaalka ah waa 100 USD / 100 EUR / 100 GBP (ama u dhiganta lacag kasta oo kale). Ku deebaajiga ugu yar koontooyinka gaarka ah waa 5,000 USD. Ma jiraan wax xadeyn ah oo ku saabsan deebaajiga soo socda. Si kastaba ha noqotee, waxaa lagama maarmaan ah in la ogeysiiyo in halista howlahani ay aad u sarreeyaan sidaa darteedna aan lagula talin karin in la sameeyo dhaqdhaqaaqyo ballaaran maadaama qayb wanaagsan oo ka mid ah raasamaalka la maalgeliyey la lumin karo.
Muuqaal kale oo ay tahay in la iftiimiyo wixii hadda ka dambeeya ayaa ah in kani yahay adeeg ku leh ilaalinta dheelitirka xun ee koontada. Tani waxay ficil ahaan ka dhigan tahay in laga bilaabo xilligan saxda ah, dhammaan maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah lagu damaanad qaaday ilaalinta dheelitirka diidmada. Dareenkaan, ilaalinta isku dheelitirnaanta xun waxay xaqiijineysaa in maalgashade uusan sameyn karin lumiso lacag badan midka aad ku leedahay koontadaada. Layaab ma leh, waa ka dib dhammaan halista weyn ee hawlgalladaas. Ka sarreeya tixgelinta kale ee farsamada iyo xitaa barta tixraaca nuxurkeeda.
Dhinaca kale, barnaamijyadan maalgashiga dhijitaalka ah waxay soo dhexgeliyeen barnaamij deyn ah si looga dhigo hawlgallada hantida maaliyadeed ee awood u leh kiis kasta mid faa'iido badan leh. Gaar ahaan, waxay u muuqdaan inay siiyaan macaamiishooda dalabyada ugu wanaagsan ee dhiirrigelinta ah ee suuqyada maaliyadeed: foojarka caadiga ah, foojarka gorgortanka ama lacag celinta. Iyada oo soo jeedinno ay ku socdaan qiimo dhimis illaa 10% ah oo ku jirta dheelitirka koontada. Halka taa lidkeeda, kuwa kale loogu talagalay waxa ugu fiican
Tilmaamaha lagu ilaalinayo barnaamijyadan
Waxaa jira talooyin taxane ah si maalgashadayaasha yar yar iyo kuwa dhexe ay ugu fiicnaan karaan dhaqdhaqaaqyadooda hantida maaliyadeed ee la xushay taasna waxay u mareysaa u hogaansanaanta qaar ka mid ah talooyinka aan hoosta kuugu soo bandhigeyno:
Barnaamijka dhexdiisa, macmiilku wuxuu fursad u leeyahay kala noqo lacagaha laga bilaabo aagga xubintaada bishiiba laba jeer adigoon bixin guddiyada.
Macaamiil ayaa ka faa'iideysan kara barnaamijka Talaadada koowaad iyo seddexaad ee bil kasta kalandarka, maalinta oo dhan.
Maalmaha usbuuca kor ku xusan, macmiilku wuxuu la bixi karaa lacagaha iyadoon wax komishan ah iyada oo loo marayo nidaamka lacag bixinta ee la heli karo oo keliya hal mar maalintii.
Si looga faa'iideysto soo-jeedinta, macmiilku waa inuu dhigaa akoonkooda ganacsi ugu yaraan hal mar lixdii bilood ee hore.
Xulashada lacag la’aan waayo komishanka kuxiran wuu xadidan yahay.
Dhanka kale, waxay ka fikiraan barnaamijyo kale oo dadka isticmaala ay uga faa'iideysan karaan xaaladaha qandaraaska ee ay bixiyaan. Tusaale ahaan, shaqooyinka la jaangooyay iyo boqolkiiba farqiga (ee 50% ugu yar ee loo baahan yahay) kaas oo adeeg bixiye looga baahan yahay inuu xiro mid ama in ka badan booskiisa furan ee CFDs ama alaabooyin kale oo leh astaamo isku mid ah.
Nidaamka ka bixitaanka otomaatiga ah
Dhinaca kale, waa in sidoo kale la ogaadaa in nidaamka ka bixitaanka lacagaha otomaatigga ahi yahay adeeg si toos ah looga shaqeynayo codsiyada ka-noqoshada lacagaha ee yareynaya waqtiga wareejinta lacagaha ilaa ugu yaraan 1 daqiiqo. Codsiyada dib looma socodsiin karo oo keliya inta lagu jiro saacadaha shaqada ee shirkadda, laakiin sidoo kale habeenkii, maalmaha fasaxa ah ama xitaa ciidaha.
Boqolkiiba codsiyada la shaqeeyay si toos ah si joogto ah ayuu u koraa. Waqtigaan, 85% codsiyada macaamiisha waxaa loogu shaqeeyaa qaab otomaatig ah. Meesha waqtiga ka baaraandegidda codsigu ka yar yahay hal daqiiqo. Qaab kale, ka noqoshada maaliyaddu waxay leedahay 2 weji: daaweynta codsiga ka noqoshada iyo fulinta codsiga. Qalabaynta nidaamkan wuxuu si xawli ah u dedejinayaa xawaaraha ka-noqoshada.
Hawlgal nidaam ayaa la heli karaa
Nidaamkani wuxuu shaqeeyaa 24 saacadood maalintii, 7 maalmood usbuucii. Macaamiisha oo dhami way la bixi karaan lacagtooda wakhti kasta, xitaa habeenkii, dhamaadka usbuuca ama maalmaha fasaxa.
Nidaamka ka bixitaanka waa wax fudud oo caalami ah. Qaabkan ka bixitaanka otomaatigana waxaa laga heli karaa dhammaan noocyada akoonnada dhabta ah ee lagu xareeyo iyada oo la adeegsanayo mid ka mid ah nidaamyada lacag-bixinta ee soo socda: Skrill (Moneybookers), FasaPay, NETELLER. Waxaa lagaa doonayaa oo keliya inaad ka codsato ka noqoshada aagga xubnahaaga.
Marka la eego hawlgallada kale, midka loogu talagalay in lagu wareejiyo lacagaha u dhexeeya xisaabaadkooda ganacsi ee dhinacyada kala duwan ee maalgashiga dhijitaalka ah ayaa taagan. Dareenkan, waa in la ogaadaa inaad ka wareejin karto lacagaha koontada, oo lagu shubay kaarka bangiga, ugu dambeyn 30 maalmood ka dib taariikhda dhigaalka. Si loo dhammaystiro wareejinta gudaha: lambarkaaga sirta ah, xaddiga la wareejinayo iyo lambarka koontada aad ku socoto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Alaabada maaliyadeed » Nidaamyada dijitaalka ah ee maaliyadeed: maxay yihiin iyo sidee u shaqeeyaan?